TRUTH AND PEACE: အောင်နိုင်သူ
ညတော်တော်နက်နေပြီလေ ၊ ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုလုံး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့ ၊ လူတွေ အိပ်မော ကျနေလောက်ပြီထင်ရဲ့ ၊ ခပ်လှမ်းလှမ်း အဝေးပြေးလမ်းမပေါ်က ၊ ကားတွေ ဖြတ် သန်းမောင်းနင်သံကိုတော့ ၊တစ်ခါတစ်လေကြားနေသေးတယ် ။တစ်ဝမ်းတစ်ခါ အတွက်ခရီး သွားကြသူများလား? ဒါမှမဟုတ် အသုံးအဖြုန်း အတွက် ခရီး သွားကြသူများ လား? မသိ တော့ဘူး လေ ၊ သေချာတာတစ်ခုက ကျွန်တော်တို့ အားလုံး ခရီး သွားနေကြသူများပါလေ ။ ရည်ရွယ်ချက်တူချင်မျတူမယ်။ပန်းတိုင်လွဲချင်လွဲမယ် ။ အရောင်သွေးကွဲတဲ့ အိပ်မက်တွေ ကိုယ်စီနဲမို့ ၊ သေချာတာက အားလုံးဟာ ခရီးသွားတွေပါ ။
ဒီတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ည ကိုချစ်တယ်၊ တိတ်ဆိတ်ခြင်းရဲ့အသံ ကိုနားထောင်ဖို့လေ ။ တစ်နေကုန်အောင် အပြင်မှ ချည်းခရီးသွားနေတဲ့ ကျွန်တော်စိတ်ကို ၊အိမ် မှာထားပြီး အတွင်း ခရီး ဆက်မလို့လေ ။
စိတ်လေးကိုကြည့်ရင်းနဲ့ ၊ တစ်ခါ တစ်လေ ကျွန်တော်စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ရန်ဖြစ် ၊ သူနိုင် ကိုယ်နိုင် အသံတိတ် တိုက်ပွဲတွေ ဖြစ်နေလိုက်တာ ကြာခဲ့ပြီပဲလေ ။
ကျွန်တော်နိုင်တဲ့အခါ ၊ ၀မ်းသာလိုက်တာ ၊ ရှုံးတဲ့အခါ တော့ဝမ်းနည်းတာရော် ၊မကျေနပ်တာရောပဲ ။ ဒါသဘာဝပါလေ ။ လောက မှာလူတိုင်းဟာ အနိုင်ကိုပဲ လိုချင်တယ် ။ နံပါတ် (1) ဖြစ်ချင်တယ် ၊ အနိုင်ရရင်လည်းဝမ်းသာတယ် ၊ ငါနိုင်ပြီဟေ့ လို ကြွေး ကြော်တယ် ။အောင်နိုင်သူုဆိုတဲ့ ဂုဏ်ပုဒ် ကိုတွယ်ဖက်လို့ ။
ဘယ်လိုနိုင်တာလဲ? တကယ် တော့ အောင်နိုင်သူအစစ်လား ၊ ဒီအောင်နိုင်မူ က ထာဝရ လား ၊ ယာယီလား မေးခွန်းလေးတွေ ၊ တွေးစရာလေးတွေ ပေါ့ ဟုတ်လား?
လူတိုင်း မှာ အနိုင် ယူခွင့် ရှိတယ် ၊ အနိုင်ယူလို့ လဲရတယ် ၊ အဓမ္မ နည်းနဲ့သိမ်းပိုက် အနိုင်ယူမှာလား ? ၊ ဓမ္မအ၇ စွန့်လွတ်အနှစ်နာခံပြီး အနိုင်ယူမှာလား ၊ ဒါ ကူတော့ ရွေးရမယ် ၊ ဟုတ်တယ်နော် ။
ခွင့်လွတ်ကြပါနော် ၊ ကျွန်တော် စကားမှားသွားရင် ……… အနှိုင်း မဲ့အောင်နိုင်သူ ဖြစ်တဲ့ဘုရား ကိုတောင်အနိုင်ယူလို့ရတယ် ….ဒါပေမဲ့
အဠာဝကယာ……မြတ်စွာဘုရားရှင်က အဠာဝကခိုင်းတဲ့အတိုင်း သူဗိမာန်ထဲက၀င်ဆိုဝင် ၊ ထွက်ဆိုထွက် လုပ်နေတဲ့ အခိုက်အတန့် မှာ အာဠ၀ဟာ အောင်နိုင်သူပါ။
စိဉ္စမာဏဟာမြတ်စွာဘုရားကိုသူနဲ့ အတူ နေခဲ့ပါတယ်လို လူထု ပရိတ်သတ် အလည်မှာ စွပ်စွဲပြောဆိုနေတဲ့အခိုက်မှာ စိဉ္စမာဏာဟာ အောင်နိုင်သူပါ ။
ဒေ၀ဒတ်ဟာဂိစ္ဈကုတ်က်တောင်ပေါ်ကနေမြတ်ဘုရားကိုကျောက်တုံးနဲ့လိမ့်ချ လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်နေတဲ့အချိန်လေးမှာတော့ ဒေ၀ဒတ်ဟာအောင်နိုင်သူပါ ။
ဒီလိုပဲ အဂုင်္လိမာလာဟာ ဓားကိုင်ပြေးလိုက်နေတဲ့ အခိုက်မှာ သူလဲထင်တာပဲ မြတ်စွာဘုရား ကိုသူနိုင်ပြီ လို့ မြတ်စွာ ဘုရားပြေးနေပြီပေါ့ ။
ဒီလိုထင်ပြီး သူတို့ကျေနပ် နေကြမယ့််အောင်နိုင်သူ တို့ရဲ့သဘောအရဂုဏ်ယူနေကြမယ့်ဟုတ်တာမဟုတ်တာ ၊ခဏထား ၊ဘေးချိပ် ၊မှန်တာ ၊မှားတာ မစဉ်းစားနဲ့ ၊ လောလောဆယ် နိုင်နေကြတယ်လေ ။
ဒါပေမဲ့ ဒီအောင်နိုင်မှုဟာ မြေမမျိုခင် အချိန်ထိပဲ ရှိတာ ကိုမသိဘူး ။
ဒါပေမဲ့ ၊ ဒီအောင်နိုင်မှု ဟာ သစ္စာ ဓမ္မ ကွယ်နေတဲ့ အခိုက်အတန့် လေးဆိုတာမသိဘူး ။
ခုတော့ အားလုံး သိသွားကြလေ ပြီလေ ။ဓမ္မရဲ့ အောင်နိုင်မှု က ထာဝရ ဖြစ်ပြီး ၊ အဓမ္မ ရဲ့ အောင်နိုင်မှု ကခဏလေးဆိုတာကို ၊ ဒီနေရာမှာ ကွာတာလေး တော့ရှိပါတယ် ၊ အသိစောတာနဲ့ ၊ အသိနောက်ကျ တာ ၊ အသိစောတဲ့လူက ဘာဖြစ်သွားတာလဲ ၊ အသိနောက်ကျတဲ့လူကဘာဖြစ်သွားတာလဲ ဆိုတာကို ၊ သိပြီးသားမို့ ၊ မပြောတော့ဘူးလေ ။ကျွန်တော်.စိတ်နဲ့ ကျွန်တော်ရန်ဖြစ်ရဦးမှာမို့ပါ ။
စာရေးသူ ၊ Unknown ၊ အချိန် 12.12.07
ပစ္စုပန်(1) ညက မှောင်လွန်မကမှောင်နေပြီ ။ ဘ၀ တွေ...
မြတ်စွာဘုရား ရဲ့တရားက တကယ်အေးချမ်းပါတယ် ၊ လိုက်ပြီ...
အတ္တပုံရိပ် စာရေးသူရဲ့Blogကိုလာပြီး ဖတ်ကြတဲ့သ...
blogတွေကိုလျှောက်ဖတ်ရင်းနဲ့ ၊ စာရေးချင်တဲ့စိတ်ပေါ်လ...
‘ယုန်’ အရိပ်ခံဗိမာန်လေးမှာ စာဖွဲ့လို့ထားလိမ့်မယ်